Hello feer-feer Hello Mustaxiil - Cakaara News
Hello feer-feer Hello Mustaxiil
feer-feer(CN) khamiis 7da January 2016, Shaki kuma jiro in uu Taabogalay Horumar Baaxad wayn oo dhinacyo badan leh , tasina Qayb wayna ka tahay helida Isgaadhsiinta iyo Xidhiidhka Bulshada Deegaanka oo ku kala baahsan Dalka iyo Dibadiisaba. Guud ahaanba Degmooyinka iyo Gobolada Deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa laga hirgaliyay Isticmaalka Aalada Casriga ah ee Dhanka Isgaadhsiinta Sida Mobileka,adeegsiga aalad internentka iyo Telefoonada Guryahaba taasoo wax wayn ka tartay Xidhiidhka,ganacsiga iyo iska warhaynta Shacabweynaha dalka iyo dibadaba.
Haddaba Waxaa maantana Nasiib u Heshay Helida Isticmaalka Aalada Casriga ah ee Mobileka iyo internetka degmooyinka feer-feer iyo Mustaxiil ee Gobolka shabeele iyada oo maalintii shalay loo furay degmooyinkaasi iyo dhamaan tuulooyinka hoos yimaada. Eryadada ugu hadal haynta badan maanta ee hadheeyay degmooyinkaasi iyo tuulooyinka hoos yimaada hello waan ku maqlaa.
Isku soo isku soo wada duub oo Xukuumada DDSI iyo DFI ayaa Culays wayn saaray sidii Bulshadu ay isgaadhsiinta casriga ah laaga haqabtiri lahaa islamarkaana Xadaaradaha isgaadhsiineed ee Caalamka Baal uga gali lahaayeen.